Mid ka mid ah madaxweynayaasha dunida ugu caansan dagaal gacan ah loola tagey (Daawo) – SBC
Mid ka mid ah madaxweynayaasha dunida ugu caansan dagaal gacan ah loola tagey (Daawo)
Way adag tahay in si fudud gacan loola tago madaxweyne ay xaga hore, xaga dambe & waliba hareeraha ay ka daba yaacayaan ilaalo qaarkood hubaysan yihiin, kuwaasi oo waliba qaarkood tababar u qaba inay ka takhluusaan cid kasta oo ay u arkaan inay halis ku tahay amaanka shakhsiga ay ilaalada ka hayaan.
Hadaba dhacdo la yaab leh & qosol leh ayaa qabsatey madaxweynaha wadanka Faransiiska Nicolas Sarkozy ka dib markii dagaal gacanta loola tagey uu la kulmay maanta xili uu salaamayey dad taageerayaashiisa ah.Halkan ka daawo wacdaraha lagu dhigay Sarkozy.
Dhacdadan oo ka dhacdey deegaanka Brax ee ku dhaw magaalada Toulouse ayaa madaxweyne oo aad u faraxsan oo waliba taageerayaal si niyad & qalbi furan salaan uga qaadanaya uu nin inta gacanta si wanaagsan ugu hubadey garabka midig ee madaxweynaha hal mar soo jiitey, taasi oo keentey in madaxweyne Sarkozy oo aad u naxsan oo anfiriir uu ka muuqdo uu hoos u foorarsado isagoo waliba argagax qaaday.
Ilaalada Sarkozy ayaa ninkaasi iska lulay jaakada Madaxweynaha ku goobtey iyagoo ka fujiyey jaakada, isla markaana waxay isku gadaameen madaxweynaha, iyagoo ninkii dhulka la galay oo jeebooyin ku boobay.
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Faransiiska ee loo yaqaan Elysee Palace ayaa lagu xaqiijiyey in weerarkaasi uu geystey nin Faransiis oo haatan ay gacanta ku hayaan ciidamada Amaanka, ninkaasi oo ah dadka degan tuulada Brex ee madaxweyne Sarkozy lagu weeraray.
“Ninkii si deg deg ah ayaa loo qabtey, waxaana Madaxweynaha Sarkozy u suurtagashay in uu sii wato socodkiisii” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxtooytooyada Faransiiska.
Ninkan ayaa lagu wadaa in maxkamad la soo taago waxaana la filayaa in uu muteysto xabsi sadex sano ah iyo waliba ganaax lacageed oo gaaraya 50 kun oo doolar, sida ay sheegayaan kooxaha dhanka garsoorka ee magaalada Paris.
Dhacdadan ma aheyn tii ugu horeysay ee weerar si toos ah loo abaaro madaxweyne Sarkozy oo ay sii kordhayso nacaybka loo qabo, sanadkii 2008-dii nin beeraley ah ayaa si toos ah madaxweynaha oo ciyaaro fardo daawanayey u caayey, waxaana ka mid ahaa hadaladii uu ku yirir “Bax tag, soco, waxaad tahay faqiir ama sabool dhab ah”.
Xiliyadii ugu horeysay madaxweynimadiisa Mr Sarkozy waxaa dagaal ugu soo tafa xaytey oo ugu hanjabay dagaal nin kaluumaysato ah oo kaasi oo ka carooday mushaarka aadk au badan ee Madaxweyne.
Mr Sarkozy ayaa sidoo kale waxaa uu wehel la yahay in hadii uu marayo magaalada lagu soo tuuro dhagaxaan, ukun, iyo waliba shilamaadka ama sanuuda lacagta.
Intaasi oo kaliya kuma koobnaa waxaa la sheegay in hanjabaad dhimasho loo jeediyey iyadoo waliba fooqaq rasaasta iyo waliba rasaas nool laga helay madaxtooyada Elysee Palace intii uu soo degay madaxweyne Sarkozy.
Horaantii sanadka Mr Sarkozy wuxuu bilaabay in uu isticmaalo dalad nooca aanay rasaasta karin oo qiimaheedu ku kacay 14 kun oo doolar, si uu uga nabad galo dadka soo weerara.
Halkan hoose ka daawo Video madaxweynaha oo la lalminayo
somaalida oo kayd ugu jirta wadamada reer galbeedka
qadaaadfi oo la rabo in dalkiisa laga saaro
burccad badaada somaalida oo sii xoogsanaysa faransiiska oo somalida burcad badeed kkku noqotay baasto garcade ah
kkkkkkkkkkkkkkkk cunaha muu ku dhagoooooooooooooooooooooooooo
soomalida alaah nabad hayeelo